KHIYAANADA KU HOOS JIRTA MAQAAMKA CAASIMADA MOGDISHO IYO CIDA WADA | Saadaal Media
KHIYAANADA KU HOOS JIRTA MAQAAMKA CAASIMADA MOGDISHO IYO CIDA WADA
May 14, 2019 - 2 Jawaabood
Waxaan sibuuxda uwada ogsoonahay,Soomaaliya in ay leedahay dawlad iyo caasimad ay ku shaqeyn jireen dawladihii hore iyo kuwa hada ahba taasoo ah MOGDISHO.Taasoo ku timid kuna dhisan rabitaanka iyo codka umada soomaaliyeed oo ay ku xusantahay dastuurka dalkeena oo macnuhu yahay heshiis dadweeyne ee umada soomaaliyeed u dhantahay.Dastuurku maha wax gobol leeyahay,dagmo leedahay,tuulo leedahay,qabiileeyahay balse waa heshiis wada matala oo ay wada leeyihiin umada soomaaliyeed dhamaan oo uusan ka maqnayn hal qof. Caasimada umada soomaaliyeedna waa sidaa uun.
Dadka soomaaliyeedna magaalooyinkooda waxay xaq u leeyihiin kolba tay u arkaan in ay ku haboontahay caasimad in ay ka dhigtaan waayo codkooda iyagaa xor u ah iyo danaha dalkooda. MOGDISHO soomaali oo dhan baa isku raacsan waana astaan qaran iyo muraayadii dalkeena oo ay tahay waajib kuligeen ina saaran in aan ka ilaalinaa dhag xumada,amaan xumada,dhismo xumada,iyo wax kastoo wax u dhimi kara caasimadeena.
Laakiin waxaa jira dad hunguri meel xun ka tuuray,oo ku kacay waxaan u fiicnayn qof ka fakaraaya aakhiradiisa iyo karaamada iyo qayimka shaqsiga aadanaha ahi ku leeyahay aduunka. iyagoo ilbaxnimo iyo raganimo u qaatay ayay sidii duunyadii oo kale(loda,ariga,dameeraha) iska galeen oo ku habsadeen guryihii dawlada ee danta guud iyo kuwii shaqsiyaadka muwaadiniinta soomaaliyeed gaarka u lahaayeen, Tanoo dadkii soomaaliyeed ee wada lahaa caasimadu aysan wali soo saarin miiska dhabna looga wada hadal arinkaan.
Soomaali waa wada ogtahay,sidaa MOGDISHO ay ugaleen oo kale ayaa beelo ka soo hayaamay bartamaha soomaaliya 1991 iyagoo ka faa iidaysanaaya dawlad la aantii dhacday,ayay sidoo kale deegaanka koonfur galbeed qabsadeen kaasoo ilaa hada ay haystaan shabeelada hoose deegaankii iyo beerihii halkaasna ay ka qaadeen wadaniyiintii soomaaliyeed ee daganayd iskana lahayd. waa xaqiiqo dhab ah nin inkiri karaana majiro. waxay u sheegeen naftooda khiyaali iyo been waxaase runtu tahay in ragii lahaa deegaankaa taagan yihiin nin walibana duruuftu gayndoonto gobolkuu u dhashay.
Hadaan usoo noqdo khiyaanada ku hoos jirta maqaamka mogdisho.horta waxan waxaa wada shabakada maafiyada caalamiga ah ee ay horboodayaan madaxweyne xasan sheekh,fiqi,madahad salaad,cabdi shakuur,odowaa oo intuba kasoo jeeda gobolada dhexe ee soomaaliya.
shabakada maafiyada caalamiga ahi waxay ka koobantahay,sidan hoos ku qoran.
1.Koox siyaasiyiin ah oo xasan sheekh hogaamiyo dadkuna u yaqaan siyaasiyiinta xanaaqsan
2.Kuwo kugabada ganaacsatada suuqa bakaaraha,oo qaabilsan lacagaha shisheeyuhu bixiyo oo lagu hawlgalo,
3.Koox afka duubata oo markaa afku u duuban yahay loo yaqaan shabaab iyo isla iyaga oo ku jira ciidanka xooga kuwaas oo ah kuwii diiday in ladiiwaan galiyo faraha laga qaado xero lageeyo waana isla kooxda qaybta wajiga ufuran yahay ah.
4 Qaybtan waa dawlado shisheeye oo ay u horeeyso Emaraatku halka ay awal ethiopia u horeeysay iyo dawlado kale oo ka dhigaya shabakadan maafiyada caalmiga ah heerka ah caalami.
Shabakada maafiyada caalamiga ah oo kahelaysa dhaqaale dawladaha cadawga u ah umada soomaaliyeed,ayaa si xeeladaysan oo beelaysan ugu yeeray odayaal magaalada mogdisho,waxayna u sheegeen in maqaamka mogdisho loo baahan yahay in dawlada lagu qasbo oo lamarsiiyo in ay ogolaato,odayaashii rag wax garad ah oo ku jiray ayaa warkaa layaabay,oo kuyiri madaxweynihii hore xasan sheekh adiguba shalay markaad fadhiday maad ogolayn maqaam mogdisho oo gaar ahee maxaa maanta kuwada?
waxaad shalay adiguba diiday maanta sideed rag uula hortagee? arintii dib ayaa loola noqday,rag hadaba gaara oo iska reebay rag badan oo markii horeba lagu awrkacsanaayay oo ah odayaal sooc ah ayaa dawlada utagay. waxay codsadeen maadaama raysal wasaarihii lasiiyay ay xaqa u lahaayeen beelkale in dawladu u ogolaato maqaamka mogdisho,waayo bay yiraahdeen marwalba in beesha hada haysata gudoomiyaha iyo duqa magaalada mogdisho in iyaga uun lasiiyaa xaq maha anagoo ka dagmo badan mogdisho. dawladu way layaabtay warkaas!!
waxay yiraahdeen magaalada mogdisho laba xaafadood ayay kadagaan waa madiina iyo kaaraan,oo waliba lala dago xaafadkale oo in ay dad dhex dagan yihiin mooyee ay gooni u dagan yihiin majirto waxay haystaani waa labadaa xaafadood,inta kale marka laga saaro dayniile iyo in yaroo reer xamar ah anagaa dagan 10 xafadood codkana ugabadan.hadaba waxaan rabnaa in dawladu noo ogolaato maqaam kadibna waa taageeraynaa dawlada si kal iyo laab ah.
Odayaashaa u tagay madaxweynaha oo arinkaa sidaa uugu bandhigay,waxa uu ugu jawaabay madaxweynuhu arinka kusaabsan maqaamka aad sheegteen ee mogdisho,horta aan idin saxee mogdisho maqaam way leedahay oo waa caasimadii dalkeena taasayna kaga duwan tahay magaalooyinka intooda kale marka way haysataa maqaamkeedii. waxaanse filayaa in aad u jeedaan maamul? waxay yiraahdeen haa. wuxuu yiri maamul ilaa intii aynu xoroownay gogosha mogdisho dadkaad ku sheegteen laba xafadood bay dagan yihiin iyo reer xamar ama banaadiri ayaa soomaali u dhigi jiray,madaxna ka ahaa soomaalina isku raacsantahay kuna xurmaysaa oo lasiiyay mudnaan gaar ah iyaguna madiidana horena uma diidi jirin in ay fursad siiyaan oo markooda ku qadariyaan in dadka kale ee soomaaliyeedna ka noqdo madax magaalada wax dhib ahna horana layskuma qabin hadna layskuma qabo oo arintaa la xariirta.waxaadse ogaataan dalkaani uma baahna in dib loo celiyo! halkan wuxuu u sarbeebayaa in uu fahmay dhagartooda. hadalkii isagoo sii wata madaxweynuhu waxa uu yiri arimaha caasimadu waa mid aan khusayn madaxweyne iyo baarlamaan nin ku dhici karaa umuurahaas in uu faro galiyana majiro waxay utaal shacabka soomaaliyeed kuligiis waa masiir umadeed oo qaran.
Wuxuu yiri idinkoo iga raali ah iwaydiiya wax aan wax ka qabankaro.laakiin arinkaasi soomaali siday hore usoo ahayd iyo cidii lagu ogaa sidaa uun weeye. iyagoo ceeboobay ayay dhagar toodii lasoo noqdeen.
Hadaba meesha maqaam looma jeedo dhagartaas dhulboobka ah ayaa laystusay oo ladoonayaa in dad lagu duud siyo laguna sheego laba xaafadood,cod lagaliyo deedna laga takhaluso.hadafka u danbeeyana waa in ay helaan dawladan iyo tii timaadaba meel ay kaburburiyaan iyagoo ilaashanaaya suuqa bakaaraha iyo shabeelada hoose in ay xoog ku sii haystaan. waxay is tuseen in ay ku naaxayaan dawlad la aanta hadii dawlad la helana ay luminayaan waxay haystaan waayo sharcigaa shaqayn.
Odayaasha shabakada maafiyada ayaa dirtay.waxaad ogtihiin in shabeelada hoose shabaab aad uugu xooganaa hada waa la jabiyay intii badnayd ee, waxaad halkaa kagaranaysaa in ay isla iyagii uun yihiin oo afka duubtay,hal guri iyo halbeer oo shabaab dadkii masaakiinta ahaa ee laga xoogay uuga qaaday madhicin abidkeed! waxan ku tusayaa in shabaabku yahay shabakada maafiyada caalamiga ah isagaa beeraha iyo guryaha haysta.
Dadkii mogdisho ayay doonayaan in sheeko buste lasoo huwiyay ah xuquuq iyo maqaamka mogdisho in ay kasharciyaystaan iyagoo meel dhigtay dagmooyinka uugu badan mogdisho shaxna dhigay ay marwalba kusoo baxayaan dagmooyin badan oo ay isku qoreen waa siday latahay ee.mogdisho iyo shabeele ayay ka dhigeen dhul cusub oo hada lahelay!!
Oday dagan xaafada madiina yaa maqlay xuquuq xamar aa la raadinaa iyo maqaam,wuxuu yiri yaa waaye ninkaas? waxaa layiri waa ninkii 1991 yimid. wuxuu yiri Aryaa day guryihii islaameed iyo beerihii islaameed dadkii laga xoogay xuquuqdoodii meel ku sheeg? mise kuwaasi dad maha oo xuquuq malahan? arhooy iska qabdha waa idin ajaraahe halkaan xaaran ku naax aan ku ogaa hee cidii dhamootana meel dheer ka roogsatee ma sheekhoow idiin sheegtay! Odaygu waa nin wayn ciyaartuu garanayaa halkay kusocoto waa ruug cadaa.
Waxaan ahay nin xogaha hoose ee dalka mawada ogi laakiin waxbadan og wadani ah banaankana keenaya dhagar kasta oo dalkeena iyo dadkeena loo dhigo.hadaba maqaamleey warkaa waa la ogaaday. waxa ku hoos qarsoon maqaamka waa la ogaaday,cida wadana waa la ogaaday. mogdisho soomaalidu dadbay ku ogeeyd hadana iyagii baa haayo hayna doono waligeedba,waana magaalo lawada leeyahay taas xeer baa kayaal,cidii danbi faraha lagashana sharci dawladeed baa qabanaaya oo u yaal.shabaab iyo dawlad diid xiligiisii waa dhamaaday xaqbaa yimid iyo dawladnimo. maskax aad u liidata weeye ninka guryo uu san lahayn oo xaaran ah dagan ee tirsaday ee isyiri sidan ku hel duqa magaalada MOGDISHO oo kaga qaado kuwa fadhiya ee xaqa u leh. waxaa xusid mudan majirto cid kale oo soomaaliyeed oo saluugsan ama ku heeysato ama ku qabsan doonto duqa magaalada mogdisho cida hada fadhida maxaa jira horaa soomaali xeer uga dhigatay arinkaas.
Dadkii soomaaliyeed wada la haansho hoodii caasimadana danbi baa laga galayaa,soo jireenkii bud dhiga iyo gogosha soomaali u dhigi jiray hadana u dhigayna danbi gaara ayaa laga galayaa.waxaas oo dhamina waa dhagar iyo dawlad diidnimo waa jacayl xubigii mooryaanimo iyo lacag dollar shisheeye laga soo qaaday oo kaliya. sideedaba dadka qaarbaa jira aan munaasab u ahayn in ay dhex galaan ama wax laga waydiiyo arimo siyaasad qaran iyo dawladnimo,maxaa yeelay qaab nololeedkiisa iyo dhaqankiisa iyo fikirkiisa fiiri ehel uma aha.
Mogdisho waa caasimad umada ka dhaxaysa,oo lawada lee yahay loona siman yahay,marka cid la qadarinaayo oo mudnaan lagu siinaayo arintaan,3 weeye waa dadka uu kasoo jeedo masuulka hada haya xilka,2 reer xamar ama banaadiriga dadka la yiraahdo oo ah xadaariga mogdisho, iyo beesha dagan dayniile iyo xafado kale oo ku yaal mogdisho intan ayaa soomaalidu sii saa xushmada dagaanka iyadoo soomaalidu halkan wada leedahay qofkastaana oo muwaadin ahi wax ka noqon karo sharcina u diidayn.
Laakiin fikir horseedaaya,qabyaalad iyo burbur iyo in lagu kala tago intii yarad oo la dhoob dhoobaayay ayaa loo soo dhiibay shabkada maafiyada caalamiga ah oo ka soo horjeeda had ijeer in soomaaliya hesho dawlad shaqaysa oo dhab ah.
Meeqaamka Danta laga leeyahay waxay tahay in la dhaho Degmo kasta oo Somaliya ah waxa kasoo baxaya 3 Mudane oo Baarlamaanka ah,marka Muqdisho waa 16 Degmo =16×3=48 Mudane iyo Maamulada Beeshaasi oo iyana Xubno kale lagu helin.
Dadka Diiddan Nidaam Qaybisiga Beelaha ee Si Siman wax loo qaybsanayo waxaad arkeysaa in ay yihiin kuwo u arka in Degmooyin haddii la aado ay u kordhi tirada kuraasta uu reerkoodu ku leeyahay Baarlamaanka.Haddii ay arrintu sidaa tahay, ma dhihi karnaa in Soomaaliya loo fekerayo? Mise waa mid leh reerkeyga sidan ayaa u roon iyo mid kale oo leh aniga reerkeyga sidani uma roona?Markaa waa qabiilka meesha laga qiyaas qaadanayo ee ma ahan degaan.Si kale haddii loo dhaho waa reerihii dagaallamay, Dowladdoodii dumiyay, sida keliya ee ay heshiis ku noqdeen si Dowlad ay u yeeshaanna ay tahay in ay si siman u qeybsadaan kuraasta Baarlamaanka iyo kuwa Wasiirrada oo hadda uu qaarkood leeyahay maya ee annaga ayaa badsaneyna oo idinka degmooyin badan.
Mooryaanimo Weeye warkaasu.
Caasimada Ma umadda Soomaaliyeed ayay ka dhexeysaa oo Caasimad u tahay,mase Cid Gaar ah?,hadday Cid gaara Sheeganayso Casuumad Soomaali uma noqonayso ee ha lagu kala tago.
Si wanaagsan ayaad u dhigtay Mohamed hadii aad si dhab ah u sii eegto waxaa kuu soo baxaya nin ummad dhan hantidoodii xoog ku qabsaday oo dadkii lahaana ku laayey oo leh ha la ii sharciyeeyo xoolahan aan xaaraanta ku qabsaday hana la iloobo ummadii aan xasuuqay ka waran caqliga sidaas ah waa tee dawlada u sharciyeen karta?Muqdisho maqaamkeeda waxaa laga hadlayaa marka dadkeedii iyo hantidoodii meel lagu sheego inta ka horeysa cid xaaraan xalaaleen karta ma jirto ama dawlada hada joogto ama dawladaha imaan doono ama Muslim iyo Gaalaba maxaa yeelay waxa bani-aadmigu uga duwanyahay xayawaanka waa caqliga ilaahay siiyay caqliga saliimka ahna marna wax xaaraan ah xalaal kama dhigi karo waa masalo ilaahiya ah waxa saxa ah waa sax mar walba xitaa hadii cid doonaysa ayan jirin wixii khalad ahna waa khalad mar walba xitaa hadii dadkoo idil ay sameynayaan reer anaa taabsaday sidaa ha u fahmaan.